नेकपा विवाद कसरी टुंग्याउछ निर्वाचन आयोगले ? - हाम्रो शब्द
नेकपा विवाद कसरी टुंग्याउछ निर्वाचन आयोगले ?
नेकपाका दुई पक्षले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या फरक–फरक उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । पार्टीको औपचारिक विभाजन तथा आधिकारिकता प्राप्तिका लागि केन्द्रीय सदस्यको संख्या नै महत्त्वपूर्ण मानिएका बेला दुवै पक्षको जोड केन्द्रीय कमिटी सदस्य थपघटमै देखिएको छ ।
रियल मड्रिडको स्पेनिस लिगमा सहज जित